नेपाल आज | अब विदेशी होइन लोकल रक्सीलाई मान्यता दिनुपर्छः केशव स्थापित[भिडियो]
नेपाल आजसँग कुरा गर्दै नेकपाका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितले लोकल रक्सीलाई ब्यान हैन ब्र्यान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न कुरा बजारमा आएको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। विदेशी रक्सी बा्रन्डेड भनेर महंगोमा खरीद गरेर पिउने तर लोकल रक्सीलाई भने प्राथमिकता नदिएको कुरा उहाँले बताउनुभयो ।
तपाईँले लामो समयदेखि गाँजा खेतीलाई पनि बढी प्राथमिकता दिनु भएकने छ, यो रक्सीको प्रति तपाईँको धारणा के छ ?
यो रक्सीले पनि मुलुकलाई निदान दिन सक्छ, मुुलुकलाई सहयोग गर्न सक्छ, यो नि समृद्ध अर्थतन्त्रको आधारशील हुन सक्छ । रक्सीको बारे ब्यान हैन ब्र्यान्डिङ भन्ने पनि हाम्रो टिम नै हो । यो त अब हाम्रो बिसौँ पच्चिसौँ वर्षको मन भित्रको कुरा हो, तपाईको यो र्कितिपुरमा १७ वर्ष भयो एउटा ब्रान्डेड रेष्टुरेन्ट खुलेको, खाजा खाने ठाउँ । त्यो चाहीँ हामी नेवालहना भन्छौँ । लहना भनेको चै नेवारहरुको संस्कार सिक्ने ठाउँ हो । हामी ८७ जना मिलेर जम्मा १६ लाख उठायौँ र मैले आफूसँग भएको १ लाख हालेको थिए । ६ महिनासम्म कोही पनि आएनन् तर अहिले कोरेनाको कारण बन्द छ नभए हाम्रो दैनिक सेल्स भनेको घटीमा ६ लाख र बढीमा १० लाख हुन्छ । म रक्सी खानैपर्छ भन्दिन तर घरमा बन्ने रक्सीलाई रोक लगाउने र विदेशी रक्सी चै खानुपर्ने ?
नेपालको लोकल रक्सी पनि बा्रन्डेड भनिएका रक्सी सरह गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ? गुणस्तरीय मात्र हैन हाम्रो छोरल्पाको पानीसँग मिसाउने । हाम्रो अहिले कोदोको रक्सी भने पनि रक्सी चुआउँदा इथ्यानल पनि हुन्छ र मिथ्यानल पनि हुन्छ त्यसकारण सेपरेट गर्ने मेसिन राख्नुपर्यो । सामान्य १० हजारको मेसिन राखेर पाइप राखेपछि पहिला आगो बलेपछि ७८ डिग्री टेम्प्रेचरमा राख्ने । ९९।९ डिग्री भएको रक्सी खायो भने लाग्छ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ कति पानी मिसाउने भनेपछि एउटा स्वाद हाल्ने । खुकुरी रमले खुकुरीको स्वाद भनेजस्तै छोरोल्पाको फोटो हाल्ने ।